सम्बन्ध विच्छेदप्रति परमेश्वोरको ईच्छा के छ ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – नयाँ नियमका यी अंशहरू ले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ: मात्ति ५:३१-३२; १९:१-१२; मर्कुस १०:१-१२; लुका १६:१८; १ कोरिन्थी ७:१०-१६; भने व्यवस्था २४:१-४ मा यसको महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि छ। नयाँ करारको कालखण्डमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सांस्कृतिक समझका कारण व्यवस्थाको व्याख्याले गर्दा जवाफ दिन यो एकदम कठिन प्रश्न हो, त्यसकारण यस मुद्दामा ईसाइहरूको फरक दृष्टिकोण छ (उदाहरणका लागि जोन पाइपरले तर्क गर्दछ कि सम्बन्धविच्छेद र पुनर्विवाह कहिले पनि अनुमति छैन)।
मत्ती १९ मा सम्बन्धविच्छेदको बारेमा येशू ख्रीष्टको उत्तर येस्तो रहेको छ ।
हामी मत्ती १९ मा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं किनकि यो पूर्ण खण्ड हो । यसमा फरिसीहरू येशू कहाँ आउँछन् र सोध्छन् “के कसैले कुनै कारण स्वास्नीसंग सम्बन्धविच्छेद गर्न उचित छ ?” येशूको जवाफ उत्पत्ति १ र २ मा सृष्टिको विवरण र विवाहको लागि परमेश्वरको मूल अभिप्रायमा आधारित रहन्छ । “बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छन् र ती दुई जना एउटै शरीर हुनेछन“। अर्को, उहाँ यो तथ्यलाई जोड दिनुहुन्छ कि पुरुष र महिला विवाह गरेपछि तिनीहरू “अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नुभएको छ, त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्ट्याओस” (मत्ती १९:६)।
तर मोशा र मोशाको व्यवस्थाले के भन्दछ ?
त्यसकारण, येशूको आधारभूत उत्तर यो छ कि विवाहमा एक पुरुष र महिला परमेश्वोरद्वारा एकजुट हुन्छन् – तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् – त्यसैले तिनीहरू छुट्टिनु हुँदैन (सम्बन्धविच्छेद गर्नु हुँदैन) । तबफरिसीहरूले अर्को प्रश्न सोध्छन्: “मोशाले किन सम्बन्धविच्छेदको त्यागपत्र दिएर पत्नीलाई त्याग्ने आज्ञा दिए?” (मत्ती १९:७)। फरिसीहरूले व्यवस्था २४:१ लाई संकेत गर्दै भनिरहेकाछन्, जहाँ मोशाले एक व्यक्तिलाई आफ्नी स्वास्नीलाई सम्बन्धविच्छेदको प्रमाणपत्र दिन अनुमति दिन्छ । त्यसोभए उत्पत्ति १ र २ मा परमेश्वोरले निषेध गरेको किन मोशाले (जसले परमेश्वरका शब्दहरू बोलेको हो, आफ्नै होइन) सम्बन्धविच्छेद गर्न अनुमति दिन्छ?
येशूको जवाफ यो थियो कि यो “तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा नै” हो (मत्ती १९:८), मोशाले (परमेश्वरका शब्दहरू बोले) सम्बन्धविच्छेद गर्ने अनुमति दिए । यो कुरा सम्झनु महत्वपूर्ण छ कि उत्पत्ति १ र २ र व्यवस्था २४ को बिच एक ठूलो त्रासदी भयो: आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञाको अवज्ञा गरे। परिणाम स्वरूप, परमेश्वरले उनीहरूको न्याय गर्नुभयो तब उनीहरूलाई अदनको बगैंचामा बस्न अनुमति दिइएन। मानिसहरूको हृदय अब कठोर भएका छन्। तसर्थ, विवाहित पुरुष र महिला अझै पनि “एउटै शरीर” भइसकेका भए पनि, परमेश्वरले अब कुनै खास परिस्थितिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ। (यसलाई हेर्ने अर्को तरिका यो हो कि उत्पत्ति १ र २ मा सम्बन्ध विच्छेद कहिले पनि विवादको विषय थिएन, किनकि पति-पत्नीले कहिल्यै पनि एक अर्काको विरुद्ध पाप गरेका थिएनन्, तर त्यो उत्पत्ति ३ पछि पाप र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हुन्छ) ।
मत्ती १९:९ मा येशूको फैसला यस्तो छ: “जसले व्यभिचारको कारणबाहेक आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अर्किसंग विवाह गर्छ, त्यसले व्यभिचार गदर्छ ।” त्यसकारण, येशूले यौन अनैतिकताको सम्बन्धमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति दिनुहुन्छ (यो कसरी सहि अर्थमा बुझ्नुपर्दछ, अझै पनि इसाईहरूको बीचमा छलफलको विषय बनिरहेको छ)। १ कोरिन्थी ७:१५ मा, पावलले सम्बन्ध विच्छेदको बिषयलाई यसरि सम्बोधन गर्नुहुन्छ: यदि अविश्वासी पति वा पत्नीले विवाहलाई छोड्दछन् भने, तब विश्वासी पुरुष वा स्त्रीले बाध्य पार्दैन, यस्तो अवस्थामा, आफ्नो पति / पत्नीले छोडेको ईसाईले पाप गर्दैन भने उसले / उनीले अर्को पार्टनरले शुरू गरेको सम्बन्धविच्छेदको स्थितिलाई स्वीकार गर्दछ, कारण उनीहरु शान्तिमा रहनको लागि बोलाइएको हो। पावल अगाडि भन्दछ, कि यदि गैर-ख्रीष्टियन पति वा पत्नी ख्रीष्टियनसँगै बस्न राजी छन् भने इसाईले सम्बन्धविच्छेद गर्नु हुँदैन १ कोरिन्थी ७: १२-१४ ।
विवाह एकप्रकारको उच्च बोलावट हो ।
सारांशमा: विवाह एक उच्च बोलावट हो, जसमा एक पुरुष र महिला, जब उनीहरू विवाह गर्छन्, एक शरीर हुन्छन्, परमेश्वोर उनीहरूसँग मिल्नुहुन्छ । तसर्थ, तिनीहरू अलग वा सम्बन्धविच्छेद गर्नु हुँदैन । जहाँसम्म, यदि विवाह भित्र अविश्वास छ भने, त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ, तर त्यहाँ जोडीले आदर्श रूपमा एक अर्काप्रति माफी आदान प्रदान गर्छ र अनुग्रह देखाउँदछ भने त्यो विवाह जारी रहन्छ ।
के परमेश्वर गर्भपतनलाई अनुमति दिनुहुन्छ ?
Posted on May 28, 2020 May 29, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – आजको यी दिनहरूमा विश्वका धेरै देशहरूमा, गर्भपतनलाई वैधानिक विकल्पका रूपमा लिइन्छ, जब एक महिला गर्भवती हुन्छ तर बच्चा चाहँदैन। गर्भपतनका समर्थकहरू तर्क गर्छन् कि महिलाहरूले आफ्नो गर्भावस्था समाप्त गर्न स्वतन्त्र विकल्प हुनुपर्दछ । गर्भपतनका विपक्षीहरूले यो तर्क दिन्छन् कि एउटा भ्रुण एक विकासशील मानव व्यक्ति हो। यसैले गर्भपातलाई हत्या मानिन्छ । त्यसो […]
नोआ जस्तै हुनुहोस ।
येशू ख्रीष्टले वास्तविक रगत बगाउनुभयो ।